Akhriso:- DFS oo markale war aan caadi ahayn kasoo saartay musiibadii dowladda hoose ee xamar. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaAkhriso:- DFS oo markale war aan caadi ahayn kasoo saartay musiibadii dowladda hoose ee xamar.
July 29, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 0
Guddigii dowladda Federaalka Soomaaliya u magacowday qaraxii xarunta gobolka Banaadir ayaa caawa soo saaray warbixin hor-dhac ah oo ay ugu hadleen waxyaabihii u qabsoomay labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Hoos ka akhriso warbixinta Guddiga
Guddigii uu 24-kii bishan Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) u magacaabay maareynta qaraxii ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir iyo sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dhaawacyada ka dhashay qaraxa, ayaa Bulshada Soomaaliyeed la wadaagay warbixin hordhac ah oo ku saabsan waxyaabiihii u qabsoomay labadii maalmood ee la soo dhaafay.
xaqiijiyey illaa hadda dhimashada toban (10) qof iyo dhaawac gaaraya illaa 9 ruux oo uu ku jiro Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Waxaa la helay liiska dhaawaca xaaladdoodu aadka u liidato ee u baahan daryeel caafimaad oo dibedda ah, xamilina kara safar dibedda ah oo gaaraya 6 qof.
Waxaa sidoo kale looga faa’iidaystay fursadda imaanshaha diyaaradda dhaawacyadii shacab kale oo caafimaadkooda dalka wax looga qaban waayey, kuwaas oo wax ku noqday Kismaayo (3), Muqdisho (2) & Boosaaso (1). Sidaasi darteed isu-geyn waxaa la qaaday 12 qof oo dhaawac ah.
Waxaa isla habeenkiiba loo sameeyey baasaboorro ay ku safraan dhaawaca la qaadayo iyo dadka la safraya ee aan lahayn baasaboorro.
Tirada dhimashada la xaqiijiyay waa 10.
Allaha u naxariistee 9 ka mid ah dadka geeriyoodey waxaa lagu aasay goobihii loo qorsheeyey.
Inkasta oo qeybtii hore ee gurmadka degdegga ah ee Guddiga ay soo dhammaatay, haddana warbixinta uu u gudbiyay madaxda sare ee dalka wuxuu ku taliyay:
Guddiga ayaa u mahadceliyay dalka Qatar oo si degdeg ah gurmad ugu soo fidiyay dhaawacyadii qaraxan. Wuxuu sidoo kale Guddigu u mahadceliyay madaxda ugu sarreysa dalka sida Madaxweynaha, Ra’iisul-waasaaraha iyo Ra’iisul-wasaare ku-xigeenka oo iyagu saacad saacad ula socday hawlaha Guddiga iyo sidii loogu fududeyn lahaa hawlahooda.
Ugu dambeyntii waxa uu Guddigu Alle ka baryayaa in uu u naxariisto shuhadadii qaraxa ku geeriyootay, sidoo kalena caafimaad degdeg ah siiyo dhammaan dadkii ku dhaawacmay qaraxa.
Eng. Cabdi Cashur Xasan Guddoomiyaha Guddiga.
Degdeg:- Ciidamada Ethopia oo la wareegay Garoonka Kismaayo iyo ciidankii kenya oo hal xero isugu tagtay.